३ मिनेट मृत्यु भएपछि जे देखियो… डाक्टर परे चकित – GALAXY
विश्वभर सबैभन्दा बढी जिज्ञासा मृत्युबारे सोधिन्छ । मानिसको मृत्यु भएपछि के हुन्छ ? के मानिसको पुनर्जन्म हुन्छ कि मृत्युपछि मानिस अरू कुनै ठाउँको यात्रामा हुन्छ ? यस्ता प्रश्न मनमा नउब्जिने सायदै होलान् । तर, आजसम्म कसैले पनि यसको जवाफ दिन सकेका छैनन् । किनकि, मृत्यु त्यस्तो कुरा होइन जसलाई अनुभव गरियोस् र मानिस फेरि त्यसबाट फिर्ता भएर त्यसबारे बताओस् ।
तर, अमेरिकाको मिसिसिपीका एक व्यक्तिले मृत्युलाई जितेका मात्र छैनन्, उनले आफ्नो मृत्युको अनुभव पनि सेयर गरेका छन् । अझ अचम्म त के भने यसरी मृत्युको अनुभव सेयर गरेका वाल्टर ‘स्नो बल’ विलियम्सले बताएका अनुभवचाहिँ चिकित्सकहरूले सत्य भएको पनि बताएका छन् ।
यो सन् २०११ को कुरा हो । ५७ वर्षीय विलियम्स गम्भीर बिरामी भएपछि अस्पताल भर्ना भए । जब उनलाई अपरेसनका लागि अपरेसन थिएटर लगियो । उनमा अर्को समस्या देखियो– हृ’दयाघा’त । त्यही समयमा अक्सिजनको कमीले उनको म’स्ति’ष्कले काम गर्न छाड्यो ।
मुटु तथा म’स्ति’ष्क दुवैले काम गर्न छाडेपछि चिकित्सकले उनको अपरेसन गरेनन्, उनलाई ‘मृत’ घोषणा गरिदिए ।तर, केही समयमा नै फेरि वि’लियम्सले आँखा खोले । होसमा आएपछि उनले जे भने त्यसले त्यहाँका चिकित्सक पनि दंग परे । होसमा आएलगत्तै उनले दाबी गरेका थिए– मैले मृत्युको समय देखेको थिएँ । उनले यसो भन्दा त्यहाँ अस्पतालका चिकित्सक मात्र होइनन्, नर्सहरू पनि थिए । र, त्यो ३ मिनेटको मरणमा उनले जे देखेँ भनेका थिए, ती सबै सत्य भएको ती चिकित्सकले बताएका छन् ।
यसअघि गरिएका रिसर्चहरूले दाबी गरेका छन्, मानिसले मृत्युपछाडि अत्यन्त चहकिलो प्रकाश देख्छ । तर, विलियम्सले चाहिँ प्रकाश देखेको बताएनन् । उनले त आफ्नैवरपर भएका विभिन्न कार्यहरू देखेको बताएका थिए । यसमा आश्चर्यलाग्दो कुराचाहिँ के हो भने उनले जे भनेका थिए, ती सबै सही थिए ।
उनले त्यहाँ चिकित्सकहरूले गरेको काम, नर्सहरूले जे भनेका थिए, ती सबै कुरा भनेका थिए ।विलियम्सका अनुसार अस्पतालका मेडिकल स्टाफ उनलाई झट्का दिइरहेका थिए । त्यहाँ दुईजनाको आवाज सुनेको विलियम्सले बताएका थिए । तीमध्ये एक महिला भएको र ती महिलाले उनलाई छतबाट बाहिर निकाल्न खोजेको पनि विलियम्सले थाहा पाएका रहेछन् ।
ती महिलाले आफूलाई कर गरेर बाहिर लैजान खोजेको विलियम्सले दाबी गरेका थिए । र, त्यसलाई त्यहाँ भएका अर्का पुरुषले सहयोग गरिरहेको उनले बताए । अन्त्यमा जब उनले आफूमाथि झ’ट्का लागेको थाहा पाए, तब आँखा खोले ।नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।आँखा खोल्दा उनको अगाडि एक नर्स र अर्का एक व्यक्ति थिए । त्यहाँ भएकी ती नर्सले विलियम्सका सबै कुरा साँचो भएको बताएकी छिन् ।